Erdoğan sy ny adin’ny AKP amin’ny zavakanto sy ny kolontsaina · Global Voices teny Malagasy
Misy ireo manohy mifahatra na mafy aza ny tsindrin'ny fanjakana
Voadika ny 17 Janoary 2022 5:15 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, English, srpski, Español, English
“Manohitra ny Sivana ao amin'ny Flickr” nataon'i alias65, nampiasana lisansa CC BY-NC-SA 2.0
Nandritra ny lanonana fanao isan-taona amin’ny loka lehibe karakarain’ny filoham-pirenena ho an'ny kolontsaina sy ny zava-kanto tamin'ny volana Desambra 2021, hoy ny tenin’ny filoha Recep Tayyip Erdoğan tamin'ny vahoaka hoe: “Arakaraka ny mampatanjaka anao amin'ny kolontsaina sy ny zavakanto no ahafahanao mitondra sy mitantana ny tontolo iainanao. Zavamisy ny hoe ny fitaovan’ny kolontsaina no fitaovam-piadiana mahery vaika indrindra ho an’ireo mitantana ny rafitra maneran-tany ankehitriny.” Tao anatin'ny taona maro taorian'ny niakarany teo amin'ny fitondrana, nifehy tsikelikely ny ankamaroan'ny sehatry ny zavakanto sy kolontsaina tao amin'ny firenena ny Antokon’ny filoha Erdoğan Rariny sy Fampandrosoana (AKP).
Maro be tamin’ireo mpanakanto, mpihira, mpamoron-kira ary mpanao hatsikana fanta-daza no niharan’ny fandrahonana, famoretana ary fanaovana ramatahora tamin'ny asany. Fantatra amin'ny fampiasana ny serasera ataony ireo vondrona ireo hiresahana momba ny fitarainana sy ny politika manerana ny firenena ary noho izany heverina ho fandrahonana ho an’ny antoko eo amin’ny fitondrana. Na dia ny teathra, hatsikana ary ny vondrona mpanesoeso aza dia niharan’ny tsindry mafy avy amin'ny mpitondra. Betsaka ihany koa ny ohatra amin’ny fikasan’ny fitondrana hanakana ny fandaharana fahitalavitra, fampisehoana, ary ny mozika vahiny. Matetika midadasika ny fanazavana, amin'ny fiampangana fa mampiroborobo ny fampielezankevitra fampihorohoroana ilay fitaovana, mandrisika ny fampiasana rongony, ny fanompana ny filoha, manafintohina ny soatoavin'ny fianakaviana eo an-toerana, na manolotra fampahalalana diso momba ny kolontsaina mihitsy aza.
Tsy toy izany foana anefa no mitranga.
Tamin'ny fomba fijeriny momba ireo taona voalohany nitondran'ny AKP, nanoratra ilay akademika Emre Tansu Keten fa nifantoka tamin'ny zava-kanto sy kolontsaina rehefa tonga teo amin'ny fitondrana ny AKP tamin'ny taona 2002, ary maro ireo ivontoerana ara-kolontsaina manan-danja nisokatra teo anelanelan'ny taona 2002 sy 2011. ” Ny dingana fampifanarahana niaraka tamin’ny Vondrona Eoropeana sy ny fandrisihana ny sehatra tsy miankina hampiasa vola amin'ny sehatry ny kolontsaina sy ny zavakanto dia nitondra ny fampifanarahana ny sehatry ny kolontsaina tamin'ny fandaharan'asa ara-toekarena liberaly vaovao sy ny fanohanan'ny AKP ity dingana ity amin'ny alàlan'ny fialana amin'ny fandaharam-potoanany manokana ara-kolontsaina – mandritra ny fotoana fohy, ” hoy i Keten.
Saingy nanova ny fomba fijerin'ny antoko eo amin'ny fitondrana momba ny fironana ara-javakanto sy ara-kolontsaina tao amin'ny firenena ny fiovam-pitarihana ara-politika — indrindra taorian'ny hetsi-panoherana Gezi Park,— ” nanomboka nampiasa ny kolontsaina ho resaka politika ny governemanta taorian'ny taona 2010, izay nahita ny sehatry ny kolontsaina ho fitaovana ara-toekarena sy diplaomatika nandritra ny taompolo 2000, indrindra taorian'ny Fitroaran'i Gezi noho ny politikan'ny kolontsaina mampisara-bazana mifototra amin'ny mari-panondroana ifikirany, ” hoy i Keten.
Ny hafa milaza fa efa hita ny fiovana taorian'ny naha-voafidy indray ny AKP tamin'ny taona 2011. Tamin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny Eurasianet tamin'ny taona 2012, nilaza ilay mpahay siansa politika Cengiz Aktar rehefa nahazo fandresena fanintelony hoe: “Matoky tena sy matoky tanteraka ny praiminisitra ankehitriny fa tsy hanam-pahataperana ny fahefan'ny AKP, izay manome famantarana amin'ny lafiny hakinga-tsaina ara-tsosialy amin'ny ankapobeny.”
Efa-taona taorian'io antsafa io, nanova tanteraka ny rafitra ara-politika sy ara-tsosialy tao amin'ny firenena ny fanonganam-panjakana tsy nahomby. Andro maromaro taorian'ny fanonganam-panjakana, nanambara tany mihotakotaka ny fanjakana, ka namela ny governemantan'ny fitondrana “hitondra amin'ny alalan'ny didim-panjakana ary tsy misy fanaraha-maso ara-pitsarana na fanoherana. ,” hoy ilay mpanao gazety Barçın Yinanç raha nanoratra tamin'izany. Tamin'ny tatitra ny volana Jona 2021, nanoratra ny PEN America, fikambanana tsy mitady tombontsoa natokana ho amin'ny fitandroana ny fahalalahana maneho hevitra, hoe: “Namaly ny fikasana hanonganam-panjakana tamin'ny taona 2016 i Erdoğan sy ny AKP tamin'ny famoretana tsy an-kiato, ka nanimbazimbana ny fenitra demokratika, ary nangeja ireo ambaratongam-pahefana vaovao. Nampiasa an-keriny ireo fahefana ireo ry zareo mba hikendrena ny tsy fitovian-kevitra amin'ny sehatra manerana ny fiaraha-monina.” Anisan’ireo lasibatra hatramin’ny fanonganam-panjakana ny “mpanoratra, mpanakanto, ary ny mpamorona hafa”. .
Tonga niaraka tamin'ny COVID-19 ny fameperana vaovao. Raha nanambara i Erdoğan fa hanala ny fameperana mifandraika amin'ny valan’aretina i Tiorkia manomboka ny 1 Jolay 2021, dia nofaranany tamin'ny famoronana fitsipika maharitra vaovao izany, ary nanapa-kevitra izy fa tsy maintsy mifarana amin'ny misasakalina ny hetsika fampisehoana mozika rehetra ny 1 Jolay. Tao amin'ny lahateny iray natainy avy any Ankara, hoy izy: “Miala tsiny, fa tsy misy manan-jo hanakorontana na iza na iza amin'ny alina.” Nanomboka nalaza avy hatrany tao amin'ny Twitter Tiorka ny tenirohy #Kusurabakiyoruz (tsy miala tsiny aminao izahay), ahitana ireo olom-pirenena sy mpihira marobe naneho ny tsy fahafaliany tamin’ilay fandrarana vaovao.
Ny zoma 7 Janoary 2022, nampiditra andiana fandrarana mifandraika amin'ny fitsipiky ny tabataba any amin'ny toerana fialamboly ny tatitry ny Gazety ofisialy. Mandrara ny fampisehoana mozika mivantana ny fameperana vaovao amin'ny toerana ankalamanjana any amin'ireo faritra voalaza fa tena mila fahanginana (trano fonenana, hopitaly, trano fitaizana ankizy sy be antitra, toeram-pampianarana ipetrahana, ary trano fonenan'ny mpianatra), mila fahanginana (trano fandraisam-bahiny, sekoly, ary trano fivavahana), ary somary mila fahanginana (tranom-pitantanana sy ara-barotra, kianja filalaovana ary toeram-panatanjahantena). Ao an-trano ihany no ahafahan’ny toeram-pialamboly manao fampisehoana mozika mivantana any amin'ny faritra tena mila fahanginana. Any amin'ny toerana mila fahanginana, voarara ny hetsika ivelan'ny trano toy ny fampisehoana, hetsika, fety aorian'ny misasakalina. Any amin'ny faritra tsy dia mila fahanginana loatra, raha malalaka ny hira mivantana aorian'ny misasakalina, dia voarara ny kaonseritra, lanonana, fety, sy ny hetsika an-kalamanjana mitovy amin'izany aorian'ny misasakalina.
Hoy ilay mpisolovava Ali Gül raha nanoratra sy naneho hevitra momba ireo fitsipika vaovao tao amin'ny Twitter-ny hoe “Noho ny fiovan'ny fitsipika navoaka tao amin'ny Gazety Ofisialy, dia saika voarara avokoa ny fialam-boly rehetra aorian'ny 12 ora alina eto Torkia.”
Mampiasa ireo andrim-panjakana efa misy
Niorina tamin'ny taona 1994, ny Filankevitra Ambonin'ny Onjam-peo sy Fahitalavitra Tiorka (RTUK) no fahefana lehibe indrindra amin'ny fanaraha-maso ny haino aman-jery. Niitatra be tamin'ny taona 2019 ny fahefana ananany rehefa nomena fahefana hifehy ny fampielezam-peo an-tserasera ihany koa ny andrim-panjakana. Tamin'io taona io ihany, nandrara ny andian-tantara Amerikana Modern Family ny RTUK satria nampiasa fiteny manimbazimba ilay fandaharana ary nampiseho zaza teraka tsy tao anatin’ny fanambadiana. Herintaona taty aoriana, nadaboky ny Netflix ny andian-tantara iray raha mbola tsy nanomboka akory ny famokarana satria “tsy neken’ny RTUK ny mpilalao pelaka iray tamin'ny anjara toerany mpanohana araka ny voalaza ao amin'ilay tantara.”
Nisy ihany koa ny fampielezam-peo nasionalin'ny firenena TRT, izay nalaza tamin'ny sivana hira miisa 200 teo ho eo tamin'ny taona 2018 araka ny tatitry ny DW tany an-toerana noho ny antony nampirisika ny fisotroan-toaka na fampihorohoroana ilay hira.
Tamin'ny herintaona, nandray anjara tamin'ny fanasivanana votoaty ihany koa ny Minisiteran'ny Raharaham-pianakaviana ao Tiorkia, nilaza fa “manalavitra ny tanora amin'ny fianakaviany ary mandrisika azy ireo hanana fomba fiaina tsy manavaka lahy sy vavy” ny K-pop, izay manana mpankafy maro ao Tiorkia. Tao amin'ny Twitter, nanomboka ny tenirohy, #kpopyasaklanmasın (Tsy tokony ho rarana ny KPops) ireo Tiorka mpankafy.
“Tsy vao sambany ny fironana mozika manerantany no nokendrena tamin'ny fampahalalam-baovao Tiorka. Teo antenatenan'ireo taompolo 1990, nanamafy ny fampahalalam-baovao mahazatra ao Tiorkia fa nandrisika ny satanisma ny tarika heavy metal tandrefana. Ny fahasamihafana lehibe amin'izao fotoana izao dia lasa niteraka ahiahy teo amin'ireo mpandala ny nentin-drazana ny K-pop raha nifantoka tamin'ny tanora avy amin'ny fianakaviana laika ny olana teo aloha,” araka ny tatitra nataon'ny Ahval tamin'ny taona 2019.
Artista manao hetsi-panoherana tamin'ny alalan'ny rap
Nanoratra i Lisel Hintz, mpampianatra ambony, tao amin'ny Washington Post tamin'ny taona 2019, hoe “amin'ny ankapobeny, mety mitana anjara toerana mpanakorontana, manozongozona ny maha-ara-dalàna an’ireo eo amin’ny fitondrana ny fanakianana an-kolaka amin'ny alalan'izay heverina ho “fampahalalam-baovao momba ny fialamboly“ indrindra amin'ny fitondrana famoretana. Nanondro horonantsary rap roa manokana izay navoaka niaraka tamin'ny misasak'alin'ny taona 2019 i Hintz.
Lasa lahatsary nalaza voalohany tao amin'ny YouTube tamin'ny 6 Septambra 2019, tany Torkia ilay hira, Susamam (izay adika hoe “tsy afaka ny hangina”). Fanandratana an'i Tiorkia sy ny olam-pamoretana ara-tsosialy, politika ary ara-kolontsaina indrindra ao aminy. Tao anatin'ny 48 ora, nivadika ho iray amin'ireo tenirohy malaza indrindra tao amin'ny media sosialy Tiorka izany.
Navoakan'i Ezhel, iray amin'ireo mpiangaly rap malaza ao Tiorkia, ny hira rap faharoa, “Olay” (Lanonana), hira momba ny fanonganam-panjakana tsy nahomby nataon’ny miaramila, hetsi-panoherana Gezi Park ny taona 2016, sy ireo hetsika mampiady hevitra hafa tato anatin'ny taona vitsivitsy. Nanoratra i Hintz fa nanjaka tamin'ny alàlan'ny media sosialy ireo hira sy ny fiantraikan'izy ireo”ary maneho ny herin'ny kolontsaina pop sahisahy, mihantsy sy mambabo.”
Manam-panantenana ihany koa ny hafa toa an'ilay mpanao gazety sady mpanoratra Barbaros Altug. Tamin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny DW i Altug nilaza hoe: “Misy mpanakanto izay mamahatra mafy, na dia eo aza ny zava-drehetra. Manana hery famaharana izay nahatalanjona ny olona rehetra i Torkia. Sy ny mahery indrindra amin'ny mpanakanto sy ny manam-pahaizana,” nampiany hoe na dia eo aza, hoy izy, ny olana, ” dia mbola mendrika hitolomana ny tolona ho amin'ny demokrasia sy ny fahalalahana ara-javakanto”.